SAAMAYN LA’AANTA WASIIRADA DOWLADA FEDERAALKA EE PUNTLAND KA SOO JEEDA - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada SAAMAYN LA’AANTA WASIIRADA DOWLADA FEDERAALKA EE PUNTLAND KA SOO JEEDA
SAAMAYN LA’AANTA WASIIRADA DOWLADA FEDERAALKA EE PUNTLAND KA SOO JEEDA
Muqdisho (walwaal online), Ina Bidhaan, maqnaantii & meelihii buu kuroonaaye, Alahayoow masuuliyadii maamuus makaga dhacay.
Baraha bulshadu ku xidhiidhaa waxay qaadaa dhigayaan, waxna ka qorayaan hadaladii ay wasiirada dowlada federaalku ka jeediyeen maalintii labaad shirkii garoowe, Sidiiq Warfaa, oo ah wasiirka shaqada iyo arimaha bulshada iyo C/laahi Bidhaan oo ah wasiirka kaluumaysiga iyo kayraadka badda.
Haddaba markii la falanqeeyey labada wasiir hadaladoodii waxaa soo baxay oo banaanka timid in ay kala taageersanyihiin dowlada federaalka & maamul goboleedka puntland.
Warfaa hadalkiisu wuxuu ku cadaa in ay puntland gardarantahay, ayna tahay in ay dowlada soo raacdo, iskana dhaafto qalaanqalo ku meeraysiga.
Balse nasiib daro, Bidhaan hadalkiisu wuxuu ahaa mid jiho iyo jaah toona aan lahayn kaasoo cabri la sida uu uga bixi lahaa wax u muuqdey mixnad siyaasadeed oo uu cagaha la galay.
Wuxuu kala xulan kari waayey, waxa uu aaminsanyahay ee laabtiisa hurda iyo waxa uu iska dhigi karo si uu u sii haysto mansabka siyaasadeed, hadalka wasiirku ma ahayn hadal siyaasadeed cad, mana ahayn hadal uu ka badheedhay oo la garan karo. Mar wuxuu yidhi puntland gogol ha u fidiso dowlada federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, markalena wuxuu yidhi madaxweyne Siciid Deni Xamar hanoo raaco. Waa laba hadal oo aan meel wada abaari kari. Sidaa darteed inuu iska aamuso ayaa u roonayd.
Wasiirka waxaa ka muuqdey laba wejiilayn, kalsooni daro, baqdin & aqoon la’aan siyaasadeed. Hayeeshee wixii aan dhawraaba waa sida ay u abaalmariso samaan iyo xumaan dowlada federaalku marka weftigaasi kusoo laabto Muqdisho. guud’ahaana waxaa shirkaa kaga dhacay wasiirada dowlada federaalka fool xumo weyn, waayo war-murtiyeedka kasoo baxay shirkaasi wuxuu muujiyey saamayn la’aanta haysta wasiirada dowlada federaalka ee loo nisbeeyo in ay puntland ku metelaan dowlada federaalka somalia.
Previous articleWax ka ogaaw sida loo qaybsado, xilalka Puntland!
Next articleRa’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Wafdi uu hoggaaminayo ayaa saaka u ambabaxay Addis Ababa?